Tafiditra Anaty Tantaran’ny Amboaran’ny Football Aziatika i Aostralia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Febroary 2015 16:05 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, 日本語, English
Mpanohana an'i Korea maka nialoha ny lalao famaranana nifanandrindrana tamin'i Aostralia. Saripikan'ny mpanoratra Manuel Ribeiro.
Lasa “tompondakan'i Azia” ny Socceroos avy ao Aostralia rehefa nandresy 2-1 ny Devoly Mena avy ao Korea Atsimo tamin'ny Amboaran'ny Konfederasiona Aziatika 2015 notontosaina tao Sydney.
Tompondakan'i Azia! Alefa Socceroos
Heniky ny fanehoan-kevitry ny mpanohana miresaka ny lalao famaranana tontosaina ao amin'ny tanin'ny [lalao] cricket ny Twitter. Nironan'ny besinimaro ihany koa ny Selfies taloha sy taorian'ny lalao.
Eny fa na di ampialalao aza dia te-handrakitra ity fotoana ity tamin'ny alalal'ny selfie:
Nahazo ny selfie-n'ny mahatompondaka #AC2015 i @MassLuongo
Mihoatra ny 76.000 ireo mpankasitraka nankao amin'ilay Kianjaben'i Aostralia ao amin'ny Zaridaina Olaimpikan'i Sydney izany lany tanteraka ny tapakila fidirana. Niangavy ny rehetra hampiasa ny fitateram-bahoaka, indrindra fa ny fiaran-dalamby ny mpikarakara:
Lany ny tapakilan'ny Famaranana Konfederasioana Aziatika androany [alahady]! Ataovy azo antoka fa mahazo tombontsia amin'ny fitaterana maimaimpoana ary tongava aloha!
Ahoana ny nahatongavan'ny roa tonga tany amin'ny famaranana
Ny Kapiteny Tim Cahill no nitarika ny ekipa Aostraliana hoany amin'ny famaranana tamin'ity taona ity rehefa nandresy an'i Emirà Arabo Mitambatra tamin'ny 2-0 tamin'ny lalao manasa-dalana. Korea Atsimo notarihan'ny kintany Son Heung Min, ihany koa dia nahatratra ny famaranana rehefa nandresy tamim-pahasarotana an'i Iràka tamin'ny 2-0 tao Sydney. Talohan'izany ny Irakiana nandresy an'i Iran tamin'ny ampahaefa-dalana notontosaina tao Canberra. Nikendry ny hahazo ny amboarany fahatelo tamin'ny amboara aziatika ny Koreana. Na izany aza, nitari-dalana i Aostralia tamin'ny lalao famaranana rehefa nanokatra ny isa i Massimo Luongo :
Efa heverina ho kintana vaovaon'ny Socceroos sahady i Massimo :
Oay e. Lalao mahafinaritra. Fotoana iray an'ilay mahay avy amin'ny printsy vaovaon'ny football Aostraliana
Resy in'efatra nandritra ireo lalao lalao famaranana notontosainy hatramin'ny nandrombahany ny fandresena farany tamin'ny 1960 (1972 tamin'i Iran, 1980 tamin'i Koety ary tamin'ny 1988 tamin'i Arabia Saodita) ary ankehitriny nanoloana an'i Aostralia, izay sambany nampiantrano ny Amboara Aziatika raha niditra tao amin'ny konfederasiona tamin'ny 2006, tamin'ny lalao aziatika ny Devoly Mena Koreana. Resy tamin'ny famaranana tao Qatar tamin'ny 2011 ny Socceroos. Resy nanoloana an'i Japana 0-1 nandritra ny fanalavam-potoana ry zareo.
Sarotra tamin'ny mpankasitraka ny nino saingy mpitari-dalana amin'ny lalao boalina fandaka any amin'iny faritra iray amin'izao tontolo izao iny i Aostralia :
Iza no naminavina fa hanjaka amin'ny ligin'ny tompondaka aziatika sy ny ambaoara aziatika hoan'ny ekipam-pirenena i Aostralia 12 volana lasa izay?
Taorian'ny 90 minitra rehefa resy lahatra avokoa ny rehetra fa hizotra mankany amin'i Aostralia ny fandresena, dia nanasahala ny isa i Korea Atsimo rehefa nahatafiditra baolina ilay kintan'ny ekipa Son Ming, nahatonga ny mpakasitraka Aostraliana ho kivy sy voatery nidirana tany amin'ny fanalavam-potoana:
Nandritra ny fanalavam-potoana, nitari-dalana i James Troisi, raha nampiditra ny baolina faharoa hoan'i Aostralia taorian'ny lalao mahafinaditra avy amin'i Juric tany amin'ny zoro ankavanana :
ENY ENY ENY ! 1:2 nampidi-baolina hoan'i Socceroos i Troisi! Alefa Socceroos!!!
Lasa mampidi-doza hoan'ny olona manana olana eo amin'ny fo ny lalao. Miteny amim-pitebitebena fatratra ao amin'ny Twitter ny mpankasitraka :
Raha mbola mahasahala ny isa i Korea dia hitomany aho… Tsy Aostraliana akory aho [Alefa Socceroos]
Taorian'ity fandresena mahafinatra azon'i Aostralia ity dia maro no mino fa halaza kokoa eo amin'ny olona ny baolina fandaka indrindra eo amin'ireo tanora mbola kely. Efa vonona ao amin'ny Twitter ihany koa ny songadina amin'ny lalao taorian'ny lanonana fanolorana ny amboara:
SONGADINA | Repoblikan'i Korea 1 – 2 Aostralia
02 Janoary 2021Vanuatu